सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीलाई फ्यालेर नयाँलाई सपथ गराउने तयारी ? – Paluwa Khabar
जेठ २९, २०७८ शनिबार 46
केही संविधानविद् र कानून व्यवसायीले अझैपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई फ्याल्ने बाटो रहेको जिकिर गरेका छन् ।
अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) तर्क गर्छन् संविधानको धारा १०३ (२) अनुसार सदनको कार्य नियमित छ छैन, अदालतमा प्रश्न उठ्दैन ।
सभामुख अग्नी सापकोटाले सीधै संसद बोलाएर राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग दर्ता लिएर त्यसको २ मिनेटमा नयाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संसद भवनमै सपथ गराउने हिम्मत छ ? उनले उपसभामुख चित्रलेखा यादवले सडकबाटै संसद ब्युँझाएको त याद होला नी भन्दै विगतको नजिर समेत स्मरण गराएका छन् ।
Prevओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट अदालतबाटै बिदाई गर्ने सर्वाच्चको तयारी
Nextनिशा घिमिरेलाई भेट्न कलाकार शंकर बिसी सहयोग सहित पुगे अस्पताल(भिडियो हेर्नुहोस्)
नेपालको अनौठा र अत्यन्तै शक्तिशाली मन्दिर जहाँ जे मागेपनि पूरा हुनेगर्छ
बर्दियामा पा’ टे बा’ घको आ’ क्रमणबाट फेरि १ जनाको ज्या’ न गयो